World Trade Funds စျေး - အွန်လိုင်း XWT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို World Trade Funds (XWT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ World Trade Funds (XWT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ World Trade Funds ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ World Trade Funds တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
World Trade Funds များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
World Trade FundsXWT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00312World Trade FundsXWT သို့ ယူရိုEUR€0.00263World Trade FundsXWT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00237World Trade FundsXWT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00283World Trade FundsXWT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0277World Trade FundsXWT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0196World Trade FundsXWT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0687World Trade FundsXWT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0116World Trade FundsXWT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00413World Trade FundsXWT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00435World Trade FundsXWT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0686World Trade FundsXWT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0241World Trade FundsXWT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0167World Trade FundsXWT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.233World Trade FundsXWT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.526World Trade FundsXWT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00427World Trade FundsXWT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00475World Trade FundsXWT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.097World Trade FundsXWT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0217World Trade FundsXWT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.332World Trade FundsXWT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.7World Trade FundsXWT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.2World Trade FundsXWT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.227World Trade FundsXWT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0852
World Trade FundsXWT သို့ BitcoinBTC0.0000003 World Trade FundsXWT သို့ EthereumETH0.000008 World Trade FundsXWT သို့ LitecoinLTC0.00006 World Trade FundsXWT သို့ DigitalCashDASH0.00003 World Trade FundsXWT သို့ MoneroXMR0.00003 World Trade FundsXWT သို့ NxtNXT0.243 World Trade FundsXWT သို့ Ethereum ClassicETC0.000459 World Trade FundsXWT သို့ DogecoinDOGE0.899 World Trade FundsXWT သို့ ZCashZEC0.00004 World Trade FundsXWT သို့ BitsharesBTS0.096 World Trade FundsXWT သို့ DigiByteDGB0.0997 World Trade FundsXWT သို့ RippleXRP0.0111 World Trade FundsXWT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000107 World Trade FundsXWT သို့ PeerCoinPPC0.0103 World Trade FundsXWT သို့ CraigsCoinCRAIG1.42 World Trade FundsXWT သို့ BitstakeXBS0.133 World Trade FundsXWT သို့ PayCoinXPY0.0544 World Trade FundsXWT သို့ ProsperCoinPRC0.391 World Trade FundsXWT သို့ YbCoinYBC0.000002 World Trade FundsXWT သို့ DarkKushDANK1 World Trade FundsXWT သို့ GiveCoinGIVE6.75 World Trade FundsXWT သို့ KoboCoinKOBO0.71 World Trade FundsXWT သို့ DarkTokenDT0.00287 World Trade FundsXWT သို့ CETUS CoinCETI9
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 14:55:02 +0000.